Kenya oo Sheegtay in ay DFKMG ka haysatey Qoraal iyo Heshiis u Ogolaanaya in Ciidamada Kenya galaan Gudaha Soomaaliya...
"Heshiiskaas waa la gaarey, madaxweynaha ayaa amar siiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ra''sul baarlamaanka in Ra'iisul Wasaaruhu uu qoraalkaas u sameeyo, qoraalkaasna ay Kenya hadda gacanta ku hayso." Faarax Macallin
SomaliTalk.com | Oct 25, 2011
Guddoomiye xigeenka Baarlamaanka Kenya Faarax Macalin Dawaare oo la weydiiyey in uu heshiis dhex maray Dawladda FKMG iyo Kenya kaas oo ciidamada Kenya u ogolaanayey in galaan Soomaaliya ayaa ku jawaabey "Heshiiskaas waa la gaarey, madaxweynaha ayaa amar siiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ra''sul baarlamaanka in Ra'iisul Wasaaruhu uu qoraalkaas u sameeyo, qoraalkaasna ay Kenya hadda gacanta ku hayso."
Waxa uu intaas raaciyey in ay "Kenya ku gashay Soomaaliya ayadoo la iska war hayo, ayada oo la isla ogyahay, ayada oo lagu faraxsan yahay. Galabtana war kaas ka duwan ayaa laga soo sheegay madaxweynaha. Wixii la hayona waa la hayaa.." Waxana uu sii raaciyey "Dawladda KMG waanu ku wareernay, ma sidaan uun ayey iska doonayaan in ay ahaato oo AMISOM ku ilaaliso madaxtooyada, doorasho iyo waxba aan la gaarin oo ummadda Soomaaliyeed sidaas u baaba'sanaato."
Faarax Macallin saxaafadda weli uma soo bandhigin heshiiskaas dhexmaray DFKMG iyo Kenya ee ogolaanaya in ciidamada Kenya galaan Soomaaliya.
Halkan ka dhegeyso Hadalka Faarax Macallin.
DFKMG oo ka aamusnayd weerarka Kenya ku qaaday gudaha Soomaaliya ayaa Isniintii Madaxweynaha DFKMG waxa uu ka soo horjeestey faragelinta Kenya asagoo yiri "Ciidamo in ay dalka iska soo galaan Dawladuna ma ogola, Shacabka Soomaaliyeedna ma ogola"
Halkan ka Dhegeyso hadalkii Sheikh Shariif
Ra'iisul Wasaaraha DFKMG oo la weydiiyey (Oct 22) in uu ka war qabo Kenya oo soo gashay Soomaaliya waxa uu ku jawaabey "Anigu ogaantayda ma ogi ilaa hadda ciidamo gudaha Soomaaliya ku jira. Xadka haa weyjoogaan, laakiin ciidamo gudaha soo galay oo hadda saacaddaan ciidamo gudaha ku jira anigu lama socdo mana ogi," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha DFKMG.. (DHEGEYSO).
Ciidamada Kenya ayaa Galay gudaha Soomaaliya October 16, 2011, kuwaas duqeyn u geystey magaalooyin ka mid ah Soomaaliya, warbaahinta Kenyana ay sheegtay in ay qabsadeen magaalooyin Soomaaliya ah.
In badan oo Soomaali ah ayaa rumaysan in Kenya jebisey heshiiska Caruusha ee 1967 dhexmaaray Soomaaliya iyo Kenya.
Akhri: Warbixin Dheer oo ku Saabsan Waxa Waqtigaan Keeney in Mugdi soo kala Dhexgalo Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo Sida loo arko Hadalkii Shiikh Sharif
"Ciidamo in ay dalka iska soo galaan Dawladuna ma ogola, Shacabka Soomaaliyeedna ma ogola" Sheikh Shariif
Madaxweyne Sheekh Shariif oo Dowladda Kenya uga Digay in ay Faragelin ku sameyso Arrimaha Gudaha Soomaaliya isla markaana wuxuu u soo jeediyey in ay Qiimeyso Dareenka Shacabka Soomaaliyeed
Warbaahinta Faransiiska ee AFP: Somali president opposes Kenyan military intervention
Madaxweynaha Dowladda Federaalka KMG Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta booqday furimaha hore ee dagaalka, gaar ahaan deegaano ku dhow dhow degmada Dayniile ayaa ciidamada Dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM ugu hambalyeeyey guulihii ay gaareen isagoo ugu baaqay dagaalka ay kula jiraan Xarakada Alshabaab ay halkaa ka sii wadaan maadaama sida uu sheegay ay dalka ka wadaan nabadgelyo xumo.
Madaxweynaha DFKMG Sheekh Shariif mar uu ka hadlayey faragelinta ciidamada Kenya ay ku sameeyeen gudaha dalka Soomaaliya, ayaa yiri “Waxaan aad uga xumahay wararka maalmahan soo baxayey ee ah in ciidamada Kenya ay gudaha u soo galeen dhulka Soomaaliya, isla markaana waxay arrintani dareen ku abuurtay Shacabka Soomaaliyeed”.
Madaxweynanaha DFKMG Sheekh Shariif wuxuu u soo jeediyey Dowladda Kenya in ay ka fiijignaato wax kasta oo carqalad ku keeni kara xiriirka labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya, isagoo sheegay in faragelinta ay Dowladda Kenya ku sameysay Soomaaliya ay tahay mid aysan la socon Dowladda Federaalka, wuxuuna ugu baaqay in Kenya ilaaliso midnimada Soomaaliya.
Sheikh Shariif wuxuu soo hadal qaaday kullan dhawaan ka dhacay Magaalada Adis Ababa kaas oo lagu go’aamiyey in Dowladaha IGAD ay ilaaliyaan derisnimada isla markaana aysan dhicin wax kasta oo keeni kara mugdi soo kala dhex gala shucuubta labada wadan, isagoo sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamda ku yaala Geeska Afrika isla markaana loo baahan yahay in Kenya iyo Soomaaliya iska kaashaadaan sidii looga wada shaqeyn lahaa nabadgelyada, hase yeeshee waxaa uu uga digey Kenya in wax kasta oo keenaya shaki uu yimaado aad ayaan uga digeynaa ayuu yiri Sheekh Shariif oo sheegayi n dadka Kenya in labaatankii sano ay aad u soo dadaaleen isla markaana ay iska ilaaliyeen in Soomaaliya ay wax faragelin ah ku sameeyaan, balse waqtiyadaasi lagama caban, wuxuuse sheegay in maalmahan dambe ay soo baxday faragelin ay ciidamada Kenya ku sameynayaan arrimaha Soomaaliya, taas oo uu sheegay in ay kicisay dareenka shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu u soo jeediyey Dowladda Kenya in ay iskaashi la soo sameyso dowladda Federaalka si loola wada socdo arrimaha soo kordho isagoo sheegay in Dowladda Federaalka aysan dooneyn in cilaaqaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya uu mugdi soo kala dhex galo.
Ciidanka Kenya oo markaas marayey Libooye (Daily Nation)
Sheikh Shariif, Oct 24, 2011 (Sawirka: AFP)
Hadalka ka soo yeerey Madaxweyne Shiikh Shariif ayaa ku soo beegmey Xilli ay weli socdaan Duqeynta Deegaano ka tirsan Gobolka Jubada Hoose oo ay geysanyaan Diyaaradaha Dagaalka Wadanka Kenya taasoo Khasaaro ka soo gaartey dad rayid ah oo aan waxba galabasan sidoo kale Raiisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Dafirey soo gelitaanka Ciidamada Kenya isagoo sheegey in uusan wax ka ogeyn balse uu sheegey in uu ogyahay in Ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin Xuduuda Kenya iyo Soomaaliya
Somali invasion backed by West, says Kenya (The Independent)
Militariga Keny aoo alaab ka daabulaya Gaarisa, Oct 18, 2011 (Sawirka http://blogs.cfr.org)
Faafin: SomaliTalk.com | October 25, 2011
1955 Ingiriiska ayaa gobolka loyaqaan Reserved Area(Ogaadeenya) iyo Hawd kuwareejisey Itoobiya.
10/15/1959:Waxaa la diley Cabdirashiid cali Sharmaarke, oo ahaa Madaxweynihii Soomaaliya, oo safar kumaraya Gobolada dalka.
Oct 28, 1967 waxaa Is-Afgaradkii Caruusha ee 1967 (Arusha Memorandum of Understanding) uu dhexmaray xukuumaddii Soomaaliya iyo Kenya, kuna saabsanaa NFD.
21 Oct 1969: Waxaa wadanka inqilaab ku qabsaday ciidan militari oo uu hogaaminayey Maxamed Siyaad Barre. 1/1977:Waxaa kor u kacay xiisada dhulka ee Soomaaliya iyo Itoobiya.
July 23 1977: ciidanka Soomaaliya ayaa galay dhulka Soomaaliyeed ee gobolka Ogaden. Ethiopia waxa ay taageero militari ka heshay dalalka USSR, Cuba iyo Libya. Dagaal khasaare badan geysey ayaa dhexmaray Somali iyo Itoobiya.
November 1977 Soomaalidu waxa ay eryeen ruuskii ku sugnaa cariga Soomaaliya. Waxana ay Soomaaliya markaas mucaaniwo weydiisatey USA iyo UK. USA waxa ay ogolaadeen oo qura taageerida aadaminimo, halka UK ay Soomaaliya siisay mucaawino aadamino iyo hub intaba. OAU ayaa isku deyey in ay wadahal soo qabanqaabiyaan laakiin waftigii Soomaaliya ayaa kabaxay wadahadalkii. Itoobiya waxa ay bilowdey habkii lamagbaxay"scorched earth" oo afsoomaali ahaan u dhiganta "u cadayn dhulka sidii laf hilibka laga xaquuqay" kan oo ahaa in lasumeeyo biyaha, la laayo xoolaha, dhulka ladeganyahay lagabarakiciyo, taas oo dhanka ahayd (SALF). Taageero ay Itoobiya ka heshay Ruuska awgeed waxa ay dib u qababsatay Somali galbeed (ogaden) markey taariikhu ahayd March 15 1978. Reference: Somalia History